महात्मा गान्धीलाई गाली गर्ने कालीचरण को हुन् ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperमहात्मा गान्धीलाई गाली गर्ने कालीचरण को हुन् ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
हरिद्वारमा भएको धर्म संसदमा विवादास्पद अभिव्यक्तिको विवाद अन्त्य हुनअघि नै रायपुरमा भएको धर्म संसदले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । छत्तीसगढको राजधानी रायपुरमा आयोजित धर्म संसदको एक भिडियो भाइरल भएको छ जसमा अकोलाका कालीचरण महाराज महात्मा गान्धीलाई गाली गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भिडियोमा कालीचरण महाराजले महात्मा गान्धीका लागि अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै उनको हत्या गर्ने नाथुराम गोडसेको प्रशंसा गरिरहेका देखिन्छन् । उनको भाषणमा धर्म संसदभित्रका केही व्यक्तिले पनि ताली बजाइरहेको भिडियोमा देखिएको छ । रायपुर नगरपालिकाका सभामुख तथा कांग्रेस नेता प्रमोद दुबेको उजुरीपछि स्थानीय प्रहरीले कालीचरण महाराजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
चाखलाग्दो संयोग यो हो कि प्रमोद दुबे धर्म संसदका आयोजक मध्येका एक हुन् । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा विधायक मोहन मरकमले पनि यस विषयमा उजुरी दिएका छन् । उनले कालीचरण महाराजविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् ।
प्रमोद दुबेले भने, “महात्मा गान्धीका लागि यस्तो अपमानजनक भाषा प्रयोग हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका थिएनौं । यो कुनै एजेन्डा अन्तर्गत गरिएको हुनुपर्छ जस्तो देखिन्छ ।” महाराष्ट्र विधान सभाको शीतकालीन सत्रमा महात्मा गान्धी विरुद्ध अपमानजनक भाषा प्रयोगको मुद्दा उठ्यो । अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री नवाब मलिकले यस मामिलामा कालीचरण महाराज विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दर्ता गर्न माग गरे । यसै क्रममा राज्यका उपमुख्यमन्त्री अजित पवारले यस विषयमा कडा कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
को हुन कालीचरण महाराज ?
कालीचरण महाराज पहिलो पटक चर्चामा आए जब उनको शिव ताण्डव भजन सोशल मिडियामा भाइरल भयो । उनको वास्तविक नाम अभिजित सराग हो । उनी मूल रूपमा महाराष्ट्रको अकोला जिल्लाका हुन् र शिवाजी नगरको भावसार पाँचबंगला क्षेत्रमा बस्छन् । स्थानीय पत्रकार उमेश अकेलाका अनुसार उनको बाल्यकाल अकोलामै बितेको छ ।
कालीचरण महाराजको पढाइबारे भरपर्दो र यथार्थ जानकारी नभेटिए पनि उनले आठ कक्षासम्म पढेको स्थानीयले बताएका छन् । कालीचरण महाराजले आफ्नो र आफ्नो परिवारको बारेमा जानकारी दिन छाडेको पनि स्थानीयले बताएका छन् । तर, आफ्नो एउटा अन्तर्वार्तामा कालीचरण महाराजले भने, “मलाई विद्यालय जान कहिल्यै मन पर्दैनथ्यो । मेरो पढाइमा रुचि थिएन । त्यसैले सबैले मेरो कुरा सुन्ने गर्थे। मलाई धर्ममा रुचि बढ्यो र म अध्यात्मतिर लागे ।”
नगरपालिकाको चुनावमा हारेका थिए ।
कालीचरण महाराज युवावस्थामा इन्दौर गएका थिए। उनीहरु धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन थाले । इन्दौरमा उनी भैयुजी महाराजको निर्देशनमा पनि आएका थिए। तर केही दिनपछि उनी भैयुजी महाराजको आश्रम छोडेर अकोला फर्किए । स्थानीय पत्रकार उमेश अकेला भन्छन्, “कालीचरण महाराज २०१७ मा अकोला फर्किए र नगरपालिकाको चुनावमा भाग्य आजमाए र हार बेहोरे ।” तर, अभिजीत सराग कालीचरणमा परिणत हुने कथा पनि निकै रोचक छ ।
देवी कालीले आफूलाई मात्र देखाएनन्, दुर्घटनाबाट पनि बचाएको उनको दाबी छ । यो दाबीका सम्बन्धमा उनले मिडियालाई भने, “दुर्घटनामा मेरो खुट्टा भाँचिएको थियो। मेरो खुट्टा ९० डिग्रीभन्दा बढी झुकेको थियो र दुवै हड्डी भाँचिएको थियो । तर काली माताले मलाई देखाइन् र उनले मेरो खुट्टा समातिन् । मेरो खुट्टा राम्रो भयो ।” “यो गम्भिर दुर्घटना थियो तर मैले शल्यक्रिया गर्नुपरेन, मेरो खुट्टामा रड लगाउनु परेन। यो कुनै चमत्कार भन्दा कम थिएन। मैले काली मातालाई देख्न पाए र त्यसपछि म एक प्रखर भक्त भएँ, उनको ।”
कालीचरण महाराज भन्नुहुन्छ, “मेरी हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो कि म राति पनि काली माँको नाम जप्ने गर्छु । मैले काली माँको पूजा गर्न थालें र धर्ममा मेरो रुचि हुन थाल्यो र म काली माँको छोरा भएँ ।” वैसे, कालीचरण महाराजले आफ्नो गुरुको नाम महर्षि अगस्त्य बताउँछन् । महर्षि अगस्त्यसँग १५ वर्षको उमेरमा भेट भएको कालीचरण महाराजको दाबी छ । महर्षि अगस्त्यले रातो कपडा लगाउन भनेका थिए तर आफू ऋषि नभएको दाबी गर्छन् । कालीचरण महाराज भन्छन्, “ऋषि मुनिले कुनै मेकअप गर्दैनन् । तर मलाई राम्रा आकर्षक डिजाइनका लुगाहरू मनपर्छ। म कुमकुम पनि लगाउँछु, दाढी पनि गर्छु, त्यसैले म आफूलाई ऋषिमुनि भन्न सक्दिनँ ।”
कालीचरण महाराजलाई कारबाही होला ?
महात्मा गान्धीमाथिको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि कालीचरण महाराजविरुद्ध साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी र महाराष्ट्र सरकारका कांग्रेस मन्त्रीहरूले कालीचरण महाराजलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । यसैबीच, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा छत्तीसगढको बहुमतको कांग्रेस सरकारले कालीचरण विरुद्ध कुनै कारबाही गर्छ कि भनेर प्रश्न सोधिरहेका छन् । तथ्य जाँच वेबसाइट अल्ट न्यूजका सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैरले ट्वीट गरे, “के कालीचरणलाई गिरफ्तार गरिनेछ वा हरिद्वारमा जस्तै यहाँ केही हुनेछैन ।”
यसै क्रममा छत्तीसगढका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेलले भने, ‘बापूलाई गाली गरेर समाजमा विष फैलाएर यदि कुनै पाखण्डीले आफ्नो नियतमा सफल हुन्छु भन्ने सोच्छन् भने त्यो उनको भ्रम हो ।